ICanada yenza ugonyo olunyanzelekileyo kwicandelo lezothutho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » ICanada yenza ugonyo olunyanzelekileyo kwicandelo lezothutho
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuqala kwe-30 ka-Okthobha ka-2021, abahambi bemka kwizikhululo zeenqwelo moya zaseCanada, kunye nabahambi ngeeVIA Rail kunye neRocky Mountaineer oololiwe, baya kucelwa ukuba bagonywe ngokupheleleyo, ngaphandle kwemida ethile.
ICanada ifuna ugonyo lwe-COVID-19 kuyo yonke inkonzo karhulumente kunye namacandelo ezothutho alawulwayo.
Inkulumbuso, u-Justin Trudeau, kunye no-Sekela-Nkulumbuso u-Chrystia Freeland, namhlanje babhengeze iinkcukacha ngezicwangciso zikarhulumente zokufuna ugonyo lwe-COVID-19.
Abaqeshi kumacandelo omoya olawulwa yimibutho yomoya, oololiwe, kunye nabezothutho elwandle kuya kufuneka kude kube ngu-Okthobha u-30, 2021 ukuba athobele.
Ukusukela ekuqaleni kobhubhane we-COVID-19, sizibophelele ukukhusela impilo kunye nokhuseleko lwabo bonke abantu baseCanada. Kungenxa yoko le nto sisebenze nzima ukuhambisa izitofu ezikhuselekileyo nezisebenzayo kwaye saseta inqanaba lokubuyela kwimeko yesiqhelo elinceda wonke umntu. Enkosi kwizigidi zabantu baseKhanada abasonge imikhono yabo ukuze bagonywe, kwaye ngoku ngeepesenti ezingama-82 zabantu abafanelekileyo baseCanada abagonywe ngokupheleleyo, iCanada yinkokeli yehlabathi kugonyo lwe-COVID-19. Njengomqeshi omkhulu welizwe, uRhulumente waseKhanada uya kuqhubeka nokudlala indima yobunkokheli ekukhuseleni ukhuseleko kwiindawo zethu zokusebenza, uluntu lwethu, kunye nabo bonke abantu baseKhanada ngokuqinisekisa ukuba uninzi lwabo lunako ukugonywa ngokupheleleyo.
The Inkulumbuso, u-Justin Trudeau, kunye noSekela-Nkulumbuso, uChrystia Freeland, namhlanje ubhengeze iinkcukacha ngezicwangciso zikarhulumente zokuba afune Ugonyo lwe-COVID-19 kuyo yonke inkonzo yaseburhulumenteni kunye namacandelo ezothutho alawulwa ngomanyano.
Ngaphantsi komgaqo-nkqubo omtsha, abasebenzi bakarhulumente baseburhulumenteni kuLawulo oluphambili loLuntu, kubandakanya namalungu eRoyal Canadian Mounted Police, bayakucelwa ukuba baqinisekise imeko yabo yokugonywa nge-Okthobha 29, 2021. Abo bangafuniyo ukubhengeza imeko yabo yokugonya okanye ugonyo luya kubekwa kwikhefu lolawulo ngaphandle kwentlawulo kwangoko nge-15 kaNovemba ka-2021.
Abaqeshi kwi umoya olawulwa yimanyano, oololiwe, kunye namacandelo ezothutho olwandle kuya kufuneka kude kube ngu-Okthobha 30, 2021, ukumisela imigaqo-nkqubo yokugonya eqinisekisa ukuba abasebenzi bayagonywa. Ukuqala kwe-30 ka-Okthobha ka-2021, abahambi bemka kwizikhululo zeenqwelo moya zaseCanada, kunye nabahambi ngeeVIA Rail kunye neRocky Mountaineer oololiwe, baya kucelwa ukuba bagonywe ngokupheleleyo, ngaphandle kwezimbalwa. Urhulumente usebenza nomzi mveliso kunye namaqabane aphambili ukubeka imfuno engqingqwa yokugonya kwindawo yeenqanawa zokuhamba ngenqanawa ngaphambi kokuqalisa kwakhona kwexesha lokuhamba ngolwandle ngo-2022.
Imibutho yesithsaba kunye neearhente ezahlukileyo ziyacelwa ukuba ziphumeze imigaqo-nkqubo yokugonya ebonisa iimfuno eziziswe namhlanje kuyo yonke inkonzo yoluntu. INtloko ebambeleyo yaBasebenzi bezoKhuselo nayo iya kukhupha umyalelo ofuna ukugonywa kuMkhosi oxhobileyo waseCanada. Urhulumente uza kuqhubeka esebenza nabaqeshi kwezinye iindawo zomsebenzi ezilawulwa yimibutho yabasebenzi ukuqinisekisa ukuba ugonyo lubekwa phambili kubasebenzi bala macandelo.
Ngokufuna ugonyo kubasebenzi bakarhulumente baseburhulumenteni, abahambi, kunye nabasebenzi kumacandelo ezothutho alawulwa ngurhulumente, uRhulumente waseKhanada uya kunciphisa umngcipheko we-COVID-19, athintele ukuqhambuka kwexesha elizayo, kwaye akhusele ngcono impilo yabantu baseCanada. Ukugonywa kuyaqhubeka nokuba yinto ephambili kurhulumente njengoko sisebenzela ukuqinisekisa ukubuyiselwa koqoqosho olomeleleyo kunye nokwakha iCanada ekhuselekileyo nesempilweni kuwo wonke umntu.